Wararka - Intii lagu guda jirey Sebtember iyo Oktoobar, waaxda tikniyoolajiyadda ee loo yaqaan 'VP of Technology' ayaa hoggaamisay kooxda R&D si ay u fuliyaan xirmooyinka baaritaanka antigen ee baaritaanka 'Corona virus'.
Intii lagu guda jiray Sebtembar iyo Oktoobar, waaxda tikniyoolajiyadda ee loo yaqaan 'VP of Technology' ayaa hoggaamisay kooxda R&D si ay u fuliyaan xirmada baaritaanka antigen ee baaritaanka 'Corona virus'. Waxay ku guuleysatay in la horumariyo oo loo dhigo khadka wax soo saarka. Bishii Oktoobar 26, Guddiga Wada Shaqeynta Iskaashiga Caalamiga ee Silk Road (SRIC) waxay qabteen shirkii labaad ee fiidiyowga oo ay la yeesheen hoggaamiyeyaasha Madrid (Spain), iyagoo diiradda saarey iskaashi caalami ah oo dheeri ah. Mudane Ramon, Guddoomiyaha Isbahaysiga Isbaanishka ee Isboortiga; Mr. Victor, Madaxa Xafiiska Dhiirrigelinta Maalgashiga Madrid ee Shiinaha; Mudane.
Daniel, Lataliyaha Dhaqaalaha ee MIA ee Xafiiska Ganacsiga Dibadda ee Dawladda Hoose ee Madrid; Mr.Meng Lingwen, oo ah agaasimaha guud ee shirkadda Gaobeidian PRISES Biotechnology Co., Ltd., iyo wakiillo kale ayaa ka soo qayb galay shirka fiidiyowga. Shirkii, Mudane Ramon wuxuu soo bandhigay Isbahaysiga Isbaanishka Isbaheysiga kaas oo ah urur awood leh oo matalaya xubnahiisa isla markaana u noqonaya buundo udhaxeysa shirkadaha Latin America iyo Yurub waxaa jira in ka badan 240 xubnood oo silsilado ah oo u adeegaya ujeeddadooda si guud oo loo ilaaliyo danaha shirkadaha Isbaanishka oo loo sameeyo unug si ay ula xiriiraan warshadaha adeegga heer sare ee gudaha iyo shisheeyaha, iyagoo siiya adeegyadooda xirfadeed. SRIC waxay si joogto ah u abaabushaa shirarka isgaarsiinta warshadaha si kor loogu qaado isdhaafsiga ganacsatada isla markaana looga wada hadlo horumarka si wadajir ah. SRIC waxay diiradda saareysaa shirkadaha wax soo saarka yurubiyanka ah iyo shirkadaha qalabka caafimaadka, waxayna ku siin karaan shirkadaha adeeg deg deg ah iyo adeegsiga, ku ballaarinta waxyaabaha ay ka kooban tahay mashruucooda, siinta ciyaar buuxda faa'iidooyinka ilaha madal, sameynta guulo badan, iyo ku guuleysiga natiijada guusha dhammaan dhinacyada.
Markay ahayd 2021, 13-kii ilaa 16-kii Maajo, shirkaddu waxay ka qaybgashay Carwadii 84aad ee Shiinaha ee Caalamiga ah ee Qalabka Caafimaadka (CMEF) ee ku taal Shanghai (Xarunta Shirarka Qaranka iyo Xarunta Bandhigga), Booth Number: 62Q42 ayaa adiga ku sugaya!